Shuruudaha Ay Somaliland Ku Xirtay Wada-Hadalada Somalia Caqli-Gal Ma Yihiin? | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
In la helo goob dhexdhexaad ah iyo damaanad qaad rasmi oo caalami ah
In la helo goob dhexdhexaad ahi waa shuruud fudud (meelo badan ayaa la heli karaa); laakiin damaanad qaadka su’aalo ayaa ka furan. Ogoow Somaliland (SL) weli ma aha dal ka madax-banaan Somalia, sidaa darteed heshiis kasta oo dhexmara labada dhinac ma yeelan karo joog-caalami ah (international standing).
In Somalia qirato in SL iyadoo dawlad madax-banaan ah ay la midowday Somalia 1dii Luuliyo 1960kii
In Somalia wadahadaladaaanayu meteli karin shakhsiyaad ka soo jeeda Somaliland
In beesha caalamku Somaliland ula dhaqanto dal madax-banaan
In haya’daha aan dawliga ahayn dhamaantood isticmaalaan astaanta calanka Somaliland
Previous articleDHAGAYSO:15 October 50 Sano Ka Hor Sidee U Dhacay Madaxweyne Cabdirashid Sharma’arke Laascaanood.
Next articleDAAWO:- Haweenka Boosaaso oo hadalo adag kula hadlay Madaxwaynaha Puntland “Deni wuu fashilmay reer bariguna way fahmeen”.
axmed October 16, 2019 At 12:14 pm
Waa diidmo Heshiis ma rabaan dadkaan, waa carqaladeyn. taariikhdana been ayey ka sheegayaan, Goormey dowlad madaxbanaan noqdeen , yaa aqoonsadey Calanka laga taagey sow ma ahayn calanka Buluuga ah. Ingiriis habeenimuu gudey ee uu ka baxay, barasaabkii Hargeysa joogey Xamar buu tegey ,isaga oo sheegey in aaney hakaa ka dhisin wax dowlad ah ee ay yihiin dadkaas Gobolla Somali ah sida ay doorteen, qoraaladii ayaa la hayaa, odayaal wadaniyiin ah ayaa meesha joogey, u sheegey ingiriis in ay Xamar kubiirayaan iyo Somali. waxaan qaylinayaa taariikhda ayey been ka sheegayaan, mana soconeyso taasi ,mana rabaan heshiis.
Atoore October 16, 2019 At 5:52 pm
Waa sheeko raqiisa waxay soo qoreen.soomaalilaan waa gobal ka mida soomaaliweeyn.Hase ahaatee reer soomaalilaan way u dacwoon karaan xaq ay leeyahiin oo ka maqan.Dawlad gaara baan nahay iyo hanala aqoonsado waa waxaan waxba ka hirgali doonin.Haddii hargeeysa loo aqoonsado dawlad buuxda waa khasab in Jig-jiga iyo Gaariso ayana loo aqoonsado dawlado kale.
Mubarik Yusuf October 17, 2019 At 12:29 am
Danta Somaliland waxay danta ugu jirtaaa in aala wada hadal.. Zoo malia sidaa udaa u waalato. inta Zoomalia waalan tahay waxaan dhisaynaa qaran Somaliland oo xoog leh.
Mubarik Yusuf October 17, 2019 At 12:32 am
Danta Somaliland waxy ku jirtaaa in aan la wada hadal… inta Zoo maliaya , waalan tahay is qarxinayso waxaan dhisaynaa qaran Somaliland oo xoog leh